By administrator on	 May 25, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
जेठ १२, गैंडाकोट । नेपालमा युवाहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमण दर बढि रहेको पाईएको छ । सरकारले गरेको अध्यावधिक विवरण अनुसार युवाहरुमा संक्रमण उच्च रहेको पाईएको छ । हालसम्म नेपालमा संक्रमित व्यक्तिहरु २१ देखी ३० वर्ष उमेर समूहका बढि रहेका छन् । त्यसपछि ३० देखी ४० वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् ।
हिजो साँझ सम्म २१ देखी ३० वर्ष उमेर समूहका २ सय २१ र ३० देखी ४० वर्ष उमेर समूहका १ सय ४९ जनामा यो संक्रमण देखिएको थियो । सोमबार बिहान ७२ जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा पनि युवाहरु बढि रहेका छन् ।
आज ७२ जनामा संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा कोभिड–१९ का पुष्टी भएका संक्रमितहरुको सङ्ख्या ६७५ पुगेको छ ।
जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या बढि छ । हाल सम्म पुरुष ५ सय ९५ रहेका छन् भने महिला ८० जना रहेका छन् । आज संक्रमण देखिएका हरु मध्ये दैलेखमा एक महिला रहेको र अन्य सबै पुरुष रहेको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उनिहरु १५ देखी ५३ वर्ष उमेरका रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार धनुषा, कपिलवस्तु, काठमाडौं बारा, रौतहट, सप्तरी, बाँके, दैलेख जिल्लामा नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन् । संक्रमित व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कका रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काठमाडौं, वि.पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र, हेटौंडा, भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सुर्खेतमा गरिएको परिक्षणमा सो पुष्टी भएको हो ।
हालसम्म १०५ जना निको भई घर फर्किएका छन् । डिस्चार्ज भएका कोभिड–१९ संक्रमितहरुको औषत अस्पताल बसाई १९ दिन रहेको छ । हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३ रहेको छ । नेपालमा संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ । आज लकडाउन ६३ औं दिनमा पुगेको छ ।